बदमासी गर्ने वीरगञ्‍जका दुई वटा पेट्रोल पम्पमा सिलबन्दी
कलैया-गुणस्तर तथा नाप तौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले आज बारामा सञ्चालित दुई वटा पेट्रोल पम्पमा सिल गरेको छ। कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं १ स्थित अमित आयल स्टोर र कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं १३ स्थित विजय आयल स्टोरमा सिल गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख शशिकान्त यादवले जानकारी दिए। अमित आयलले विसं २०७१ देखि जाँच नगराएको र १० लिटर […]
सिन्धुपाल्चोक, २१ असोज । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सांगाचोकगढी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका उद्योग तथा पसलहरुमा छापा हानेको छ । नगर उपप्रमूख जानुका पराजुलीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बजार अनुगमन गरेको हो । नगरपालिकाले बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ अनुसार उद्योग तथा पसलहरुमा राखिएका वस्तुहरु, तिनको गुणस्तर, मूल्यसूचि लगायतका विषयमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा मिति नाघेका खाद्य वस्तुहरु […]
काठमाडौँ– नेपालको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिलाई नेपालकै एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार साँझ आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उक्त प्रालिलाई नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । चौधौँ वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी तथा ट्राभल अवार्ड कार्यक्रममा भारतका सामाजिक न्याय तथा वातावरण राज्यमन्त्री रामदाश अठवाले र पर्यटन राज्यमन्त्री के […]
बैंकहरुबाट आक्रामक कर्जा प्रवाह : एक सातामा १९ अर्ब
काठमाडौं, १९ असोज । बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा अत्यन्त तिव्र गतिमा अगाडि वढेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना सुरु भएसँगै बैंकहरूले आक्रामक ल्यान्डिङ गर्न थालेका हुन् । बैंकहरूले असोजको दोस्रो सातामा मात्रै १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका तथ्यांक आएको छ । असोज ६ देखि १२ गतेसम्मको अवधिमा २८ वटा वाणिज्य बैंकले ८ […]
काठमाडौं, १८ असाेज । दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? तपाईले विदेशबाट ल्याउने कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन भने कतिपयमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याउँदा जफत हुने तथा अनावश्यक शुल्कहरु बुझाउनुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ। विदेशबाट फर्किनेले खासगरी मोबाइल, टिभी तथा अन्य विद्युतीय सामान, गरगहना र मदिरा ल्याउँदा विचार पुर्याउनुपर्छ। यस्ता सामानमा सीमितता तोकिएकाले […]
Posted in कभर स्टोरी / फिचर,बिजनेस / अर्थ Read More »
नयाँ ठिमी राधे राधेमा सीजीको डिजिटल शोरुम
काठमाडौं, १७ असाेज । भक्तपुरको राधे राधेमा सीजी ईलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो नयाँ सीजी डिजिटल मल्टी ब्राण्ड शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कम्पनीले सीजीका उत्पादन सहजरुपमा ग्राहक समक्ष पु¥याउने उद्देश्यले सीजी डिजिटल मल्टी ब्राण्ड शोरुममा बिस्तार गर्दै आएको छ । शुक्रबार कम्पनीले सीजी डिजिटलको नयाँ शोरुम स्थापना राधे राधे नयाँ ठिमीमा गरेको छ । यो कम्पनीको […]
काठमाडौं, १७ असाेज ।बन्दीपुर केबलकार कम्पनीले तनहुँको बन्दीपुरवासीका लागि केबलकारको शेयर खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले पूर्वघोषणा गरे बमोजिम बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सर्वसाधारणका लागि शेयर खुल्ला गरेको हो । बन्दीपुरमा बसोबास गर्नेले रु एक लाखदेखि रु पाँच लाखसम्मको शेयर खरिद गर्न सक्ने बन्दीपुर केबलकार प्रालिका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले बन्दीपुरवासीका लागि […]
बानेश्वरको संगम स्वीट्समा शिलबन्दी, विक्रि वितरणमा समेत रोक
काठमाडौं,१६ असोज । अखाद्य वस्तु विक्रि वितरण गरेको भन्दै सरकारले काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको संगम स्वीट्समा शिल गरेको छ । पसलले विक्रि गर्दै आएको मिठाइमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि गोदाममा बानेश्वरको मीलनचोकमा रहेको पसलको उत्पादन कक्षमा शिल गरिएको हो । बानेश्वर चोकमा रहेको पसलको विक्रि वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ । खाद्य प्राविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, […]
वर्ल्डलिंक ग्राहकलार्इ विदेश घुमाउने नयाँ योजना
काठमाडौं, १४ असोज- इन्टरनेट कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसले आफ्ना ग्राहकलार्इ विदेश घुमाउने नयाँ योजना ल्याएको छ। दसैं-तिहारलगायत पर्वलाई लक्षित गरेर २३ जना ग्राहकलार्इ विदेश घुमाउने योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसले २३ औं वर्ष पूरा गरी २४ वर्षमा लागेको अवसरमा विजेतालाई उपहार स्वरुप भ्रमणको अवसर प्रदान गर्न लागेको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ। इन्टरनेट खरिद वा […]
‘यसपालिको चाडमा सिजी लाग्यो घरघरमा’ : विशेष छुट सहितका आकर्षक उपहार
काठमाडौं, १० असोज- नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रोनिक्स् ब्राण्ड सि.जी. ले यसपालीको चाडपर्व दशैं, तिहार तथा छठलाई लक्षित गर्दै आप्नो “यसपालीको चाडमा, सि.जी. लाग्यो घरघरमा” नामक नयाँ उपहार योजना ल्याएको छ । सिजीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उपहारको घोष्णा गरेको हो । यस उपहार योजना अन्तर्गत अब ग्राहकहरुले सि.जी. ब्राण्डका विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स् सामानहरुको खरिदमा १० वर्षसम्मको […]